News – MMOnlineNews
15/03/2022 16/03/2022 747	0 Comments
ဆရာထကြ တပညြ့လကဇြောငြးထကဆြိုသလို လကစြှမြးပှ အကှမြးဖကပြှနသညြေ့ မှနမြာနိုငငြံ၏ ဒုတိယမှောကြ လူယုတမြာ… ရခိုငဘွကမွှာ သူဦးဆောငတွဲ့တပကွ ရှာ (၄) ရှာကို အစဖှောကခွဲ့ကှတယွ။အမှိုးသမီးတှအကေုနလွုံးကို Sexual attack လုပပွှီးသတခွဲ့ကှတာ သူရဲ့တပတွှပေါ 😡ဒုတိယလူယုတမွာကို မေ့နမှောဆိုးလို့ စိုးဝငွးဟာ
15/03/2022 15/03/2022 747	0 Comments
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မဟာ သြင်္ကန် အတွက် တိုင်း သူပြည်သားများအား ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးတော့မည် လူဦးရေ (၂၀၀)ထက်ပို၍ မစုဝေးရ အမိန့်ထုတ်သော်လည်း သတ်မှတ်ချက်ကို ချိုးဖော်ကာ ဗိုလ်ရှုခံကျင်းပခဲ့သည့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက COVID 19
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ မီးပွိုင့်များတွင် ဆိုလာစနစ်များ တပ်ဆင် အသုံးပြုသွားတော့မည် ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ် ပြည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းထောင့် ဘုန်းကြီးလမ်းစံပြမှတ်တိုင်အနီး ယာဉ်ထိန်းရဲကင်းရုံးအနီးထားရှိသော မီးပွိုင့်များတွင် solar power backup system များဖြင့် စတင်အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ Slar
တစ်သောင်းတန်နှင့် ငါးထောင်ကျပ်တန် ငွေအတုပြန့်နှံ့မှု ငွေကျပ်ဘီလီယံချီရှိနိုင်ဟု ဗဟိုဘဏ်အရာရှိပြော ဘဏ်စနစ်ပြိုလဲနေခြင်းနှင့် ဥပဒေ မစိုးမိုးခြင်းတို့ကြောင့် ငွေစက္ကူအတုများကို ထိန်းသိမ်း ဖမ်းစီးစစ်ဆေးရန်မှာ လတ်တလော မဖြစ်နိုင်သေးဟုလဲ ဗဟိုဘဏ်အရာရှိက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက အာဏာသိမ်းပြီး ၁ နှစ်အကြာ
13/03/2022 13/03/2022 747	0 Comments
တရုတ်တွေအငန်းမရလိုချင်နေတဲ့ မြန်မာမြေရှား (Rare Earth)အကြောင်း မြေရှား (Rare Earth) ဆိုသော အမည်နှင့် လိုက်ဖက်စွာ ထိုသတ္တုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေရာတိုင်း မထွက်ရှိပေ။ မြေရှားသတ္တုထုတ်လုပ်နေသော နိုင်ငံအရေအတွက်မှာ လက်ချိုးရေတွက်လို့ရသည်။ ထိုနိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် မြေရှားသတ္တုတင်ပို့နေသော
ရုရှားဘက်က အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး (၁၁) ယောက် အထိ ယူကရိန်းရဲ့စနိုက်ပါလက်ချက်မိ သေဆုံး
ရုရှားဘက်က အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး (၁၁) ယောက် အထိ ယူကရိန်းရဲ့စနိုက်ပါလက်ချက်မိ သေဆုံး မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ တတိယမြောက်ဗိုလ်မှူးချုပ်အဖြစ်ကျဆုံးသွားတာက ဗိုလ်မှူးချုပ် Andrei Kolesnikov ပါ။ အသက် (၄၅) နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ပထမဦးဆုံးကျဆုံးတာက ဗိုလ်မှူးချုပ် Andrei
နောက်ဆုံး ဗျူဟာဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး လူသိရှင်ကြား ကျင့်သုံးလာရတဲ့ စစ်ကောင်စီ
နောက်ဆုံး ဗျူဟာဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး လူသိရှင်ကြား ကျင့်သုံးလာရတဲ့ စစ်ကောင်စီ လူမြင်ကွင်းမှ တပတ်ကျော်ကြာ ပျောက်ဆုံးသွားသော အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင်သည် စစ်အရာရှိများ ကျောင်းဆင်းပွဲကို ဗီဒီယို ကွန်ဖရင့်မှ တဆင့် စကား ပြောရင်း ပြန်လည် ထွက်ပေါ်
ယူကရိန်း စစ်ပွဲအတွင်း အမေရိကန် ဝင်ပါတာနဲ့ တတိယ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ပြီလို့ ဂျိုး ဘိုင်ဒန် သတိပေးပြောကြား ( တတိယ ကမ္ဘာစစ်ကိစ္စ အမေရီကန် သမ္မတ နှုတ်ကထုတ်ပြောလာပြီဆိုတော့ကာ….)
13/03/2022 747	0 Comments
ယူကရိန်း စစ်ပွဲအတွင်း အမေရိကန် ဝင်ပါတာနဲ့ တတိယ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ပြီလို့ ဂျိုး ဘိုင်ဒန် သတိပေးပြောကြား ( တတိယ ကမ္ဘာစစ်ကိစ္စ အမေရီကန် သမ္မတ နှုတ်ကထုတ်ပြောလာပြီဆိုတော့ကာ….) ယူကရိန်း မှာ ရုရှား ကို
ရှေ့တန်းပထမဆုံးအကြိမ်ထမ်းဆောင်ရန်တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ဦးတည်လိုက်သောအင်္ဂလန်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသစ်ကြီးHMSQueenElizabeth ပထမဆုံးအကြိမ်ရှေ့တန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ဦးတည်လိုက်သောအင်္ဂလန်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသစ်ကြီးHMSQueenElizabethတော်ဝင်ရေတပ်ရဲ့မကြာသေးမီကမှတပ်တော်ဝင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသစ် HMSQueenElizabethဦးဆောင်သောလေယာဉ်တင်တိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ်အုပ်ဟာသူမရဲ့ပထမဆုံးစစ်ဆင်ရေးတာဝန်အတွက်အခြေပြုကာHMNBPortsmouthမှလက်ရှိအငြင်းပွားရေပြင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ဦးတည်တပ်ဖြန့်ထွက်ခွာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုခရီးစဉ်တွင်သူမဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့ဆက်စပ်ပင်လယ်များ သို့သွားရောက်တပ်ဖြန့်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၉ကတည်းကအဆိုပါသင်္ဘောကြီးရဲ့ပထမဆုံးရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးတာဝန်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဖြစ်တယ်လို့တော်ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးWilliamsonကဆိုထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်ကတော့ ယခုကဲ့သို့စေလွှတ်လိုက်ခြင်းအတွက်နေတိုးအဖွဲ့ကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့မိမိတို့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နက်ရေပြင်ကိုတစ်လက်မမှအထိမခံဘဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုလိုအပ်သလိုတုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ ဘယ်လိုများလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမဲ့အနေအထားပါ။ယခုခရီးစဉ်အတွင်းHMSQueenElizabethအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံRyukyuကျွန်းအနီးတွင်အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးရေတပ်များနဲ့ပူးတွဲစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ Crd..mmdemocracy
ပူတင်သေပါစေလို့ ကျိန်ဆဲတဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ အင်စတာဂရမ်က ဖော်ပြခွင့်ပြုပေးမည်
ပူတင်သေပါစေလို့ ကျိန်ဆဲတဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ အင်စတာဂရမ်က ဖော်ပြခွင့်ပြုပေးမည် ဖေ့စ်ဘုတ်က သူတို့ရဲ့အမုန်းစကားပြောဆိုမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ ယာယီပြောင်းလဲမှုအနေနံ့ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် သေပါစေလို့ ကျိန်ဆဲတဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖော်ပြခွင့်ပြုသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ အင်စတာဂရမ်တို့က